DOWNLOAD Virtavia F-22A Raptor FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 38 675
MDL Port-Over tsy mifanaraka P3Dv4
Fa FSX-P2 & FSX-Steam & P3D v1. * v2 v3 hotsapaina
Fa ny FS2004 dikan kitiho eto
Faran'izay mpiady amin'ny maro textures sy modely. Quality taloha payware ankehitriny maimaim-poana. Anisan'izany ny fanao feo, fomba amam-panao sy ny fifandraisana virtoaly gauges cockpit sy 2D tontonana, ihany koa ny manasongadina tafondro vokany (jereo readme.txt).
Ny Lockheed Martin / Boeing F-22 Raptor dia mpamily fiarakaretsaka miisa roa mipetraka, izay mampiasa fitaovam-piadiana fiara dimy voalohany izay mampiasa môtera. Noforonina ho mpandresy ambonimbony kokoa izy io, saingy manana fepetra fanampiny izay ahitana fanafihana an-tanety, ady ara-elektronika, ary manamarika ny asam-pitsikilovana. Lockheed Martin Aeronautics no mpamorona voalohany ary tompon'andraikitra amin'ny ankamaroan'ny fiaramanidina, fitaovam-piadiana ary fihaonana farany an'ny F-22. Ny mpiara-miasa Boeing Defense, Space & Security dia manome ny elany, ny felatanana afta, ny fidirana avionika, ary ny rafitra fanofanana.
Ny fiaramanidina dia variously voatendry F-22 sy F / A-22 nandritra ny taona maro alohan'ny asa fanompoana ara-dalàna hiditra USAF tamin'ny Desambra 2005 ny F-22A. Na dia eo aza ny fampandrosoana maharitra ho fe-potoana sy lafo vidy, ny United States Air Force mihevitra ny F-22 singa manan-danja ny US Tactical rivotra hery, ary milaza fa ny fiaramanidina dia tsy manan- tsahala misy fantatra na kasaina mpiady. Lockheed Martin milaza fa ny fitambaran'ny ny Raptor ny voromby, hafainganam-pandeha, fahaizany mamikitra, marina tsara sy ny toe-javatra fanentanana, miaraka rivotra-to-rivotra sy ny rivotra-to-nitoto ady fahaiza-manao, mahatonga azy ny tsara indrindra mpiady ankapobeny eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Air Chief nitaona Angus Houston, teo aloha Lehiben'ny ny Aostralianina Defence Force, hoy 2004 fa amin'ny "F-22 dia ho miavaka indrindra naorina hatramin'izay fiaramanidina mpiady."
Ny halafon'ny ny fiaramanidina, ny tsy mazava rivotra-to-rivotra ady asa fitoriana noho ny fahatarana eo amin'ny Rosiana sy ny Shinoa fahadimy-taranaka mpiady fandaharana, ny Etazonia fandraràna ny Raptor fanondranana, ary ny mitohy fampandrosoana ny nomanina mora kokoa zavatra maro F-35 niteraka antso mba hamaranana F-22 famokarana. Tamin'ny Aprily 2009, ny Minisiteran'ny Fiarovana naroso mba hitsahatra mametraka baiko vaovao, manaiky ny Kongresy fankatoavana, ho famatsian-draharaha farany Tally ny 187 miasa fiaramanidina. Ny National Defense Ny fanomezam-pahefana ho an'ny Fiscal taona Act 2010 tsy nanana famatsiam-bola ho an'ny bebe kokoa F-22 famokarana. Ny farany F-22 voakodia niala ny fiangonana-dalana, 13 Desambra 2011 nandritra ny lanonana ao amin'ny Dobbins Air Reserve Base.
Koa satria 2010 ny F-22 efa namely ny tsy voavaha ny olana sy ny mpanamory rafitra oksizenina, izay nandray anjara tamin'ny iray fianjerana sy ny fahafatesan 'ny mpanamory. Ao 2011 ny andian-tsambo dia mafy orina ho an'ny efa-bolana talohan'ny sidina resuming asa, nefa tatitra momba ny oksizenina olana rafitra no nanohy. Tamin'ny volana Jolay 2012, ny Air Force dia nanambara fa ny hypoxia-toy ny soritr'aretina za-draharaha no nateraky ny diso miditra tsimoramora ao amin'ny mpanamory 'tsindry akanjo; dia nosoloina ny miditra tsimoramora sy fanovana ny rafitra filtration ireo ihany koa. (Wikipedia)
A-7E / H Air Force Air Force Corsair Hellenic FSX
L-39 Albatros Package an'ny miaramila FSX & P3D